Ihe mgbochi mmiri: Gịnị bụ ihe nchịkọta faịlụ nke ebe nrụọrụ weebụ?
Otu onye nchịkọta faịlụ weebụ bụ ngwá ọrụ dị mkpa maka webmasters na-arụ ọrụ iji meziwanyewanye visibilụ ahịa na nkà nyocha njikwa search engine. Onye ntanetị weebụ bụ otu n'ime ihe nchọgharị weebụ kachasị elu nke eji wepu ọdịnaya na ndekọ ndekọ dị ka ihe oyiyi na ederede na ibe weebụ. Ndị ọkachamara na Webmasters na ndị ọkachamara na-ahọrọ ka ha na-eji ndị na-ewepụta ihe na ebe nrụọrụ weebụ dịka usoro ahụ anaghị achọ ihe ọ bụla - rtg free slot games.
Weebụ Web na-enye ndị na-ere ahịa n'Ịntanet ohere iji gbanwee ọdịnaya n'ime ụdị dị iche iche. N'ime afọ ndị gara aga, e nwere usoro ihe dị oké ọnụ na ngwanrọ na-ewe oge iji wepụ faịlụ ndekọ na ibe weebụ. Onye na-ewepụta ihe na ebe nrụọrụ weebụ jikọtara ihe ndị chọrọ na nkọwa ndị ahịa kwuru.
Olee otú onye nchịkọta faịlụ na-arụ ọrụ
Onye na-ere ahịa na ebe nrụọrụ weebụ na-ejikarị ya eme ihe maka arụmọrụ n'ịntanetị na nke offline. Ị bụ onye na-elekọta webmaster na-arụ ọrụ n'iwepụta ọdịnaya na ijide ndị na-ege gị ntị ntị? Onye ntanetị weebụ bụ ngwọta kachasị mma maka mgbasa ozi n'ịntanetị.
Ịmezi nlezianya azụmahịa gị, nyochaa nkọwa ngwaahịa, na ịkụtu ahịa ị na-atụ anya abụghị nke dị mfe. Inye onye nchịkọta faịlụ na ebe nrụọrụ weebụ na-etinye gị n'ọnọdụ kachasị mma iji kpụga okporo ụzọ n'ezie na ebe nrụọrụ weebụ gị. Lee ụzọ ọsọ ọsọ na esi emepụta ọrụ ntanetịime weebụ.
Mgbe ị na-ewepụ data sitere na ibe weebụ, tụlee ịchekwa nsonaazụ n'ime faịlụ ndekọ dị ka MySQL. Ịnwekwara ike ịnyefee data weghachite na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ maka amaokwu n'ọdịnihu.
Denye na njirimara data gị
Mgbe ịchọtara saịtị ahụ, ị ​​ga - achọpụta na ị ga - ịchọrọ ịchọta, kọwaa ụdị data na ozi a ga-ewepụ.
nchịkọta data weebụ
N'ebe a, onye nchịkọta faịlụ weebụ na-eji URLs kpọmkwem na data nchịkọta dabere na ozi ahụ
nkwado ntanetị oge niile
N'ịbụ onye a họọrọ dịka otu n'ime ndị na-ewepụta faịlụ weebụ, web Extractor na-enye ndị ọkachamara na enyemaka zuru oke n'ịntanetị nye ndị ahịa. site n'iji usoro okwu a, tụlee ịjụ ndị ọrụ ntanetị ọ bụla n'oge ọ bụla n'ụbọchị. A na-atụle iji tiketi na ịchọtaghachi nkwurịta okwu ma dozie nsogbu ahụ na-adịgide adịgide
Gịnị mere eji eji Web Extractor?
) Atụmatụ nke ndị na-enyocha weebụ na-ekpebi njedebe nke faịlụ nbudata nke ndị na-ewepụta ihe na-ewepụta chịkọta data bara uru dị ka nkọwapụta ngwaahịa, mkpado ahịa, na àgwà oyiyi n'oge. Nke a bụ ọrụ ndị ọzọ dị egwu nke ndị na-ewepụta faịlụ na weebụ.
Nchịkọta nyocha na ntinye ngwaahịa
East Web Extractor weghachite ozi bara uru dị ka nkọwa ngwaahịa, nyochaa fim na ntụle, na ọnụahịa nke ngwaahịa na ebe nrụọrụ weebụ e-commerce.
N'ahịa, ịme ka njikọ aka onye njedebe dị oke mkpa. Mee ka ndị ọrụ gị jiri aka na-eme ihe site n'iji scrappers web.
Ntinye nke data nchekwa na ahịa
Dịka onye na webmaster, inwe ozi ọhụrụ banyere ngwaahịa ahịa ugbu a bụ ihe kachasị mkpa. Ndị na-emepụta ihe na ebe nrụọrụ weebụ na-eme ka ndị na-ede blọgụ na ndị ahịa 'ruo oge na ngwaahịa ahịa ahịa.
Weebụ weebụ bụ ngwá ọrụ nchapu nke na-enyere ndị ahịa aka wepụ ihe oyiyi na faịlụ sitere na ebe nrụọrụ weebụ e-commerce. Jiri akwukwo ihe ntanetị weebụ a iji kpochapụ ihe edepụtara ma jiri data maka ma ọ bụ ntanetị na ntanetị.